Tag: kumucheto kwewebhu radio | Martech Zone
Tag: kumucheto kwewebhu redhiyo
China, January 22, 2015 Mugovera, January 14, 2017 Douglas Karr
Yakaiswa mukati mako mazuva ese nekushambadzira gurus ... haufanire kubhadhara zvekubaya. Iva wepakutanga, nyora zvirimo, govana pasocial media - uye mashiripiti kutengesa kwacho kunouya kuchirovera pasi musuwo wako. Kana ivo vachadaro? Ini ndinoramba ndichiparidzira vateereri vedu kuti haina kumbobvira iri svikiro pamusoro peimwe, ndiyo nzira yavanogona kufudza kana kuteedzana. Muchiitiko cheKutsvaga Injini Kugadzirisa maringe neKutsvaga Injini Kushambadzira uye Kubhadhara